Ungayithola kanjani i-backlink emihle ngezindlela zamahhala nezingaqondile?
Izixhumanisi zangaphandle noma ezifakiwe zingasebenza njengenjini ye-SEO ezinsukwini zethu. Ama-backlink aziswa kakhulu yizinjini, ikakhulukazi yi-Google futhi zizisize ukuba zithole isikhundla sewebhu ekhasini lekhasi lokusesha. Ngokusho kwemithombo ethile, izixhumanisi ezingenayo ziyi-second factor factor ye-Google ngemuva kokuqukethwe kokuqukethwe. Ngaphandle kwe-backlink ibhizinisi lakho ngeke libonakale kumakhasimende akho angahle futhi kamuva lizolahleka - interruttori orari wifi astronomici paga con paypal.
Namuhla, ukuhlelwa kobuchule bokusebenza akusebenzi okufanayo neminyaka eminingana ngaphambili ngaphambi kokuba inani lamanethiwekhi angenayo liyisici esibaluleke kunazo zonke kwiphrofayli yokuxhuma ewusizo. Njengamanje, izinjini zosesho zihlola izinga le-backlink kunokuba ziningi. Kuyinto enkulu emithonjeni yakho izixhumanisi zakho ezizayo nokuthi zifanele kanjani okuqukethwe okuqukethwe kuwebhusayithi. Empeleni, izinjini zisebenzisa izici eziningi zokunquma ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo zokubeka amasayithi. Noma kunjalo, abakhi besixhumanisi abanolwazi bahlukanisa izigaba ezine ezibanzi - ukuhambisana, ukwethemba, ukuhlukahluka kanye negunya. Ngakho, zonke izixhumanisi zakho ezingenayo kufanele zilandele lezi zindlela ezine ezidingekayo. Uma bengalandeli lezi zidingo, kufanele uzame ukuthuthukisa ikhwalithi yabo noma ukusebenzisa i-Google Disavow Tool ukususa nabo.
Ngakho-ke, ake sixoxisane ngezinto ezibalulekile zokuthola ama-backlink aphezulu kusuka kumawebhusayithi ahloniphekile futhi athembekile.
Izindlela zokuthola ama-backlink amahle ukuthuthukisa isikhundla sekhasi lewebhu
Inhloso yokwakha isixhumanisi akumele wenze izixhumanisi zakho zibukeke ngokwemvelo ukwenza izixhumanisi zakho zemvelo. Indlela enhle kunazo zonke yokudala ama-backlink ukukhiqiza ikhwalithi nokubandakanya okuqukethwe ukuze abasebenzisi baxhumane nayo. Nokho, empeleni, akukhona njalo okwenzekayo. Indlela ephumelelayo kakhulu ukukhomba imithombo ephezulu ye-web enegunya nokuqukethwe abangathanda ukuyixhumanisa nayo. Inkinga ukuthi kunzima ukuthola izixhumanisi kusuka kumasayithi aphezulu e-PageRank ngoba asebenza kuphela ngezizinda ezidumile futhi abe namazinga aphezulu kakhulu. Kodwa-ke, kule ndima, sikubuthela amanye amasu wokwakha okusebenzayo okuzosiza ukuthi uthole ama-backlink amahle.
Umuntu ohambahambayo wamiswa nguBrian Dean
Udinga ukwenza ucwaningo lwakho lwe-niche emakethe futhi uthole amawebhusayithi noma amakhasi ewebhu angatholakali. Esikhathini esilandelayo, udinga ukusebenzisa noma iyiphi inqubo yokuxhumanisa yobuchwepheshe futhi uthole izizinda ezixhumanisa nekhasi elisekho. Ukuze uthole lolu lwazi ungasebenzisa i-Semalt Web Analyzer noma i-Majestic Crawling Tool. Esikhathini esilandelayo, udinga ukuhlukanisa okufanele embonini yakho nasezindaweni eziyigugu. Dala ucezu olusha lokuqukethwe noma uthathe i-athikili yakho ekhona uma unamathele endaweni futhi unikeze abanikazi besayithi ukuthi bafake izixhumanisi ezingatholakali nenye kusuka kusayithi lakho. Ezimweni eziningi, abanikazi bewebhusayithi bayavumelana ngalesi siphakamiso njengethuba elihle kakhulu lokuba bacebise iphrofayli yabo yokuxhumanisa ngolunye ulwazi olulandela emuva.
Indlela yokuguqulwa kwezixhumanisi
Ekuqaleni, ingahle ibonakale njengeyindlela yokwakhiwa kwezixhumanisi zeBrian Dean. Noma kunjalo, akufani nokusebenza. Ngokwale ndlela, udinga ukuhlaziya izizinda zakho ezihlosiwe futhi uthole izixhumanisi eziphukile eziholela kumakhasi angatholakali. Khona-ke ngokusetshenziswa kwe-Google Chrome Broken Link Checker Extension, udinga ukuthola izixhumanisi ezikhomba amakhasi wephutha kusuka kumthombo othile wewebhu. Ukusebenzisa lesi sandiso se-Google, uzokwazi ukuthola inombolo eminingi yezixhumanisi eziphukile. Udinga ukuhlunga lezi zixhumanisi bese uthola kuphela okudingekayo kanye nokukhiqiza emgwaqweni. Khona-ke udinga ukwakha ucezu lokuqukethwe esihlokweni esifanayo ukuthi i-website ichaze futhi iphumelele ngokusebenzisana kangcono nezizinda ezihlosiwe, uzinikeze ukuthi baxhumanise kusayithi lakho esikhundleni sephutha elilodwa.